२०१ calendar को लागि नि: शुल्क तपाईंको पात्रो डाउनलोड गर्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | पुनरावृत्त
यो नजिकिंदै 2019 र अझै एक महिना र केहि बाँकी छ, सडक क्रिसमस संग बाढीले र हामीलाई सोच्न बाध्य पार्छ नयाँ वर्ष को बारे मा हुन.
यस वर्ष २०१ finish को अन्त्य गर्न केहि बाँकी छ र हामी चाहान्छौं कि हतार नगर्नुहोस् तपाइँलाई स्रोतहरू दिनुहोस् जुन तपाइँलाई दाहिने खुट्टामा पुग्न मद्दत गर्दछ यो आउँदै २०१ 2019। सबै नि: शुल्क छन्, त्यसैले तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मन पराउने एउटालाई छान्नुहोस्।
1 लेआउट र ढाँचा
2 वेबसाइटहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
3 सुन्दर डिजाइनका साथ पात्रोहरू
4 शब्द ढाँचामा क्यालेन्डरहरू
लेआउट र ढाँचा
हामी तयार हुनुपर्दछ ताकि बैलले हामीलाई समात्न सक्तैन, र हामी सबै आफैंलाई व्यवस्थित गर्न अपडेट गरिएको पात्रो राख्न चाहन्छौं। हामीसँग ती सबै ढाँचामा छन्:
Para ह्या hang्ग अप भित्तामा।
En एक्सेल हाम्रो परियोजनाहरू कम्प्युटरमा व्यवस्थित गर्न।
Para छाप्नुहोस् र यसलाई ढोका पछाडि राख्नुहोस्।
साझा गरौं विभिन्न डिजाइन ताकि तपाईं एक छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको रुचलाई उत्तम सूट गर्दछ। तिनीहरू मध्ये केही छ .ai विस्तार, यसको मतलब यो हो तपाईं सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ एडोब इलस्ट्रेटरको साथ। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने यो ब्लगमा तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्छ ट्यूटोरियल ताकि तपाईं आफैंलाई ह्यान्डल गर्न सिक्नुहोस्।
वेबसाइटहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
ईन्टरनेट को लागी धन्यवाद, जहाँ तपाई सबै कुरा र अधिक पाउन सक्नुहुन्छ, हामीसँग हाम्रो क्यालेन्डर प्राप्त गर्न धेरै विकल्पहरू छन् यो अर्को वर्ष २०१ for को लागि।
त्यहाँ नि: शुल्क डाउनलोड वेबसाइटहरू छन् तिनीहरू साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक हेर्ने पात्रो प्रस्ताव गर्दछ। पछिल्लोहरू प्राय: प्राय: जसो हुन्छन्।
हामी तपाईंलाई प्रस्ताव गर्ने अधिकांश लिंकहरू तपाइँलाई एक zip फोल्डर डाउनलोड गर्न अनुमति दिनुहोस्। यसमा हामी बिभिन्न ढाँचाहरूका साथ धेरै कागजातहरू फेला पार्नेछौं: jpg, ai, eps, अन्य फाईलहरूको माझमा।
सुन्दर डिजाइनका साथ पात्रोहरू
यो डिजाइन धेरै छ moderno, फिक्का टोनको तटस्थ रंग। यद्यपि यो भित्र छ अंग्रेजीहामी यसलाई .ai फाईलबाट सम्पादन गर्न सक्दछौं र महीनाको नामलाई धेरै सरल तरीकाले परिवर्तन गर्न सक्दछौं पाठमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेर तपाईं डाउनलोड वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ.
धेरै धेरै डिजाइन मित्रैलो र बचकाना जसमा प्रत्येक महिना एक हो पशु फरक हामी यसलाई नर्सरी विद्यालयमा वा हाम्रा साना बच्चाहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं। क्लिक गरेर तपाईं डाउनलोड वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ.
Este लिङ्क यसले हामीलाई एक वेबसाइटमा निर्देशित गर्दछ जहाँ तपाईं एक मा वर्षको हरेक महिना डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ धेरै बोहेमियन पुष्प डिजाइन। ला टाइपोग्राफी लिपि हो, कि यो हातले लेखिएको थियो जस्तै। यो मुद्रणका लागि धेरै विवेकपूर्ण र उत्तम छ। क्लिक गर्दै यहाँ ले तपाईंलाई लैजान्छ गुगल ड्राईव प्लेटफर्म, जहाँ तपाईं सी पाउन सक्नुहुन्छपूर्ण तालिका, विभिन्न फाईलहरूको सूची।
शब्द ढाँचामा क्यालेन्डरहरू
निम्न क्यालेन्डरहरू अधिक छन् काम परियोजनाहरुको संगठन मा केन्द्रित। यो बारेमा छ खाली शब्द फाईलहरू कम्प्युटर वा प्रिन्टमा छ। तिनीहरू योजना को लागी आदर्श हो। तिनीहरूको एक लाभ यो हो कि सम्पादन योग्य र यसैले हामी हाम्रो आवश्यकता अनुकूल गर्न सक्छौं र स्वाद। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ वेब पहुँच गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » नि: शुल्क २०१ c क्यालेन्डरहरू
सियो र लाइन संग आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई १ 1876। मा खगोल विज्ञान सिकाउन